विचार Archives - Page6of7- Paschimnepal.com
Oct62016 by Paschim NepalNo Comments
प्रकाशित मितिः बिहिबार, अशोज २०, २०७३ |
हिन्दू धर्मावलम्वीहरुको सवैभन्दा ठूलो महान चाड दसैं हो । यसलाई बडा दसैं, दशहरा, विजया दशमी, आयुध पूजाआजा आदीको नामले पनि चिनिन्छ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म मनाउने चाडपर्व अर्थात नेपालको सबै भू–भागमा मनाइने राष्ट्रिय चाड पनि हो । यसलाई आश्विन शुक्ल प्रतिपदाको दिन विहान जमरा राखी नवमीसम्म दुर्गासप्तशती चण्डी पाठ गरी नव दुर्गा र तृशक्ती महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वातीको वि
हामीले धर्तिलाई के जवाफ दिने ? आफै सोचौं
नेपाल अर्ध–सामान्ती र अर्ध–औपनिवेशिक मूलुक हो । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि भ्रष्ट,सामान्ती परम्परा र संस्कृति अहिले पनि कायम छ । अर्कोतिर विस्तारवादी भारतसित सुगौली सन्धी भए पश्चात मूलुक अर्ध–औपनिवेशिक दिशामा अघि बढेको तितो यथार्तता हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ । जसका कारणले घट्नाक्रमहरु सिलसिलेवार ढंगबाट अघि बढ्दै आईरहेकाछन र विस्तारवादी भारतले आफ्ना विशालु नङ्गा दिनानु दिन गाड्
Sep192016 by Paschim NepalNo Comments
‘उम्दा’ की ‘निग्रो’ दिन ?
प्रकाशित मितिः सोमवार, अशोज ३, २०७३ |
सन्र्दभ :– संविधान घोषणाको वर्षगाँठ नेपाली जनता आफै चुनेका जनप्रतिनिधीद्धारा लेखिएको नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक वि.स. २०७२ साल असोज ३ गते संधिधान जारी भएको दिन हो । आजको दिनलाई आधा नेपालीले ‘कालो दिन’ भनेर विभिन्न कार्यक्रम गदैंछ त आधा नेपाली यसलाई यो दिनलाई ‘एतिहासिक दिन’ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरु गदैं छन । संविधान जारी गर्दा सरकारमा सामेल भएका राजनीतिक पार्टीको लागि यो दिन राम्रो हो भने त्य
विश्वमा संविधानसभा, संघीयता र नेपालमा यसको बहस तथा अभ्यास
विषय प्रवेश संविधानसभा संविधान निमार्ण गर्ने सभा हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता आफैले आफ्ना लागि आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रकृया,विधि र सिद्धान्त संविधानसभा हो । संविधान निर्माण गर्ने विभिन्न प्रकृयाहरु मध्ये संविधानसभा पनि एउटा प्रकृया हो । यो कानुन बनाउने राज्यको अंगभन्दा असाधारण प्रकृतिको हुन्छ । यसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति जनताबाट प्राप्त गरेको हुन्छ । संविधान निर्म
बिहीवार सम्मानित संसदमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोदन गर्दै गर्दा आम कर्णालीबासीको अपमान हुने गरी घोषणा गर्नु भो जन्मदा र मुत्यु हुदा २० केजी चामल सितैमा राज्यले दिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बिर्सनु भएछ अब नेपालमा नुन चामलको राजनिति सिद्धियो । खान लगाउन र बाच्न पाउने कुनै पनी नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । २०६४ सालको पहिलो संंबिधान सभा निर्वाचनमा कर्णाली पुरैले प्रधानमन्त्री ज
Sep92016 by Paschim Nepal1 Comment
प्रधानमन्त्री ज्यू ! २० किलो चाहिदैँन्
बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गरेर ‘कर्णालीका मानिस जन्मिदा र मर्दा २० किलो चामल दिने’ सरकारी प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । कर्णाली बाहिरका मानिसलाई लाग्यो होला अब, कर्णालीमा बसाई सराई गर्न पाएको भए जन्मदा र मर्दा २० किलो चामल पाइन्थ्यो होला । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न मन लाग्यो के साच्चै कर्णालीमा २० किलो चामल मात्र चाहिएको हो ? प्रधानमन्त्री ज्यू, कर्णालीला
हामी नेपाली हौं, यसमा हामीलाई आत्मगौरब छ । हाम्रा पुर्खाहरुले वीरतापूर्वक कठोर लडाई लडेर विजय हासिल नगरेको भए आज हामी नेपाली, हाम्रो देश नेपाल रहने थिएन । सयौंको बलिदान र हजारौंको जीवन अङ्ग–भङ्ग गरेर बचाएको देश हो । आधुनिक हतियार र तालिम प्राप्त दक्ष भएर नेपालीसँग युद्ध गर्न आएका ब्रिटिस सेनालाई भाला, तरवार, ढुङ्गामुढा प्रहारबाट ऐतिहासिक विजय हाँसिल गरी पूर्खाले राष्ट्र, राष्ट्रियता स्वतन्त्रता
Sep32016 by Paschim Nepal5 Comments
आदारणीय सरहरु नमस्कार । सर्वप्रथम यस जिल्लाको शैक्षिक विकास र उन्नयनका लागि यहाँहरुले निर्वाह गर्नु भएको गरिमामय भूमिका र योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्न चाहन्छु । (more…)
भारतले नेपालका नदीहरु किन कब्जा गर्न चाहान्छ ?
नेपाल जलस्रोतको क्षेत्रमा संसारको दोस्रो धनी मुलुक भनेर चिनिन्छ । तर राष्ट्रिय हित अनुकुलको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नहुँदा आफ्नो देशको जलस्रोत हामी आफैले आफ्नै हितमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो देशको जल सम्पदा माथिको विदेशी, खास गरी भारतिय गिद्धे दृष्टि दिनदिनै गाढा हुँदै गई रहेको छ । जलस्रोत लगाएत प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई लुटाएर धनी वन्न सकिन्छ भन्ने परिजीवि एवंम् दास मानसिक